I-Design Blog - Print Peppermint
Amathegi zokuphawula, Freelance, Ngiyazisebenza
Amathegi Izinsiza zamahhala, Freelance, Ukukhiqiza
Amathegi Freelance, Marketing, Ngiyazisebenza, Ividiyo
Mashi 22, 2022 Mashi 22, 2022
Umthombo:https://artisanhd.com/blog/professional-printing/uploading-online-digital-art/ Esinye sezinyathelo ezinkulu emsebenzini womculi wedijithali ukususa ubuciko bakho kusikrini buyiswe ezindlini zabalandeli abakuthandayo . Ukuvumela ubuciko bakho obudalwe ngokwedijithali ukuthi buchume njengamaphrinti ekhwalithi ephezulu kuyindlela enhle kakhulu yokungagcini nje ngokunciphisa umthwalo wokudala ubuciko obusha, kodwa uvumele ... Funda kabanzi
Amathegi ifomethi enkulu, Izisekelo Zokuphrinta
Mashi 16, 2022
I-SEO ihlala iyinkosi uma kuziwa ekuthuthukiseni umkhiqizo wewebhu. Amaqhinga okuthuthukisa injini yokusesha angakusiza ukuthi uthole ithrafikhi nokuthengisa okwengeziwe. Awudingi njalo ukuchitha izinkulungwane zamaRandi ukwakha amakhono akho e-SEO. Nawa amanye amathiphu angakusiza ukuthi ufunde i-SEO mahhala ngo-2022. Izinkundla Kuyasiza ukufunda i-SEO ... Funda kabanzi
Amathegi Marketing, Ngiyazisebenza, SEO
Isici Esihlukanisayo: I-Art World Insights evela ku-Olyvia Kwok Decani
Mashi 14, 2022
Ngezinguquko ezibalulekile esizibone emhlabeni wonke muva nje, akumangazi ukuthi umhlaba wezobuciko nawo uyashintsha futhi uzivumelanisa nezimo. Umqedazwe we-COVID-19 uthinte yonke into kusukela endleleni esisebenza ngayo nesifundisa ngayo izingane zethu ukuya ekusinikezeni izinto ezintsha zokuzilibazisa nezindlela zokuxhumana. Ishintshe izimo zengqondo... Funda kabanzi
Amathegi Art, I-Covid
Peppermint + Ukuhlanganyela Kokufundisa Kwezithombe Zomkhiqizo we-Botvidsson
Uke uzibuze ukuthi ungazithwebula kanjani izinto zephepha ezincane futhi uthwebule ukuthungwa nemininingwane? Yebo… Iqhawe lethu lomthwebuli wezithombe zomkhiqizo u-Martin Botvidsson wenze isifundo mayelana nendlela yokuthwebula izinto zephepha ezincane njengamakhadi ebhizinisi amasha e-letterpress esisanda kumprintela wona. Uma ufuna ukuthatha izithombe, zenzele umusa futhi uhlole lo mfana ... Funda kabanzi
Nakhu Okufanele Ukwazi Ngokungasebenzi Njengomklami
Abaklami bezithombe badinga ukudala imiklamo ngezinjongo eziningi, kusukela kulogo encane kuya kumklamo wesibhengezo nakho konke okuphakathi. I-Foiling nayo idinga umklamo kanjalo nomklami. Kodwa ukuklama lolu hlobo lobuciko akufani nokuklama okuvamile. Kunezinto ezithile okufanele uzinakekele ngenkathi uklama futhi ... Funda kabanzi
Amathegi Hamba, Umklami we-graphic, Umklamo wokuphrinta, Izisekelo Zokuphrinta
Iba umklami wezithombe ochwepheshe - imephu yomgwaqo okufanele ilandelwe
Idizayini yesithombe yesimanje ingaphezu nje kokudweba ngamathuluzi esoftware ahlukene. Kwakha izithombe ezintsha zomumo, imigqa, imibala, namagama ukuveza imibono. Uzothola indalo enjalo noma yikuphi, njengoba izithombe ezibukwayo zisinikela ukuze silethe ulwazi futhi zivuse imizwelo. Njengoba umbono obonakalayo womhlaba ubaluleke kakhulu… Funda kabanzi
Amathegi Freelance, Umklami we-graphic, Students
13 Ugqozi Lwedizayini Yohlelo Lokusebenza Lweselula lwabaklami be-UI/UX
Iyini idizayini yohlelo lokusebenza lweselula? Izinhlelo zokusebenza zamaselula zidingeka kakhulu ngenxa yokwanda kwenombolo yabasebenzisi bama-smartphone. Amabhizinisi akha ubukhona bawo ku-inthanethi ngokwakha izinhlelo zokusebenza zeselula ezingenasici. Ukudala uhlelo lokusebenza lweselula kubalulekile kodwa ukuze ulenze lusebenziseke kalula udinga ukuba nesakhiwo esikhethekile sohlelo lokusebenza lweselula. Ukudizayina kukodwa… Funda kabanzi
Amathegi Umklami we-graphic, UI, UX
Amakhadi Ebhizinisi Ama-3 kaSteve Jobs Athengiswa Nge-10,050$ Endalini
Ngo-2015 isikole esizimele eCalifornia esiqanjwe ngokuthi “The Marin School”, safaka amakhadi ebhizinisi ama-3 e-CEO ye-Apple endalini eku-inthanethi. Ibhidi yokuqala bekungamadola angama-600 akhuphuke ngokushesha afinyelela ku-10,050 $. Isikole siqinisekise u-Tim Knowles, oyi-CEO ye-Stacks (inkampani ehlinzeka ngohlelo lokusebenza lwe-iPhone lokwabelana ngamakhadi ebhizinisi) njengo… Funda kabanzi
Amathegi zokuphawula, Imibono yeKhadi Lebhizinisi & Ukuphefumulelwa, Usomabhizinisi, Ngiyazisebenza
Umklami Wezithombe - Lapho Uqala Ukuqeqeshwa Nomsebenzi Womuntu Osaqalayo
Odinga ukukwazi ukuze ube umdwebi wezithombe - uhlu lwamakhono namakhono adingekayo kuchwepheshe, amathiphu, ukuthi ungaqala kuphi ukuqeqeshwa.
Amathegi Umklami we-graphic, Ngiyazisebenza, Students
Amathegi Hamba, Paper, Umklamo wokuphrinta, Ukuphrinta Kuphelile
Amathegi zokuphawula, Umklami we-graphic, Paper
I-Web to Print Technology Trends 2022
I-Web to Print ibona ukukhula okukhulu. Lobu buchwepheshe busiza amabhizinisi okuphrinta ukuze akhe amathuba abalulekile emhlabeni we-inthanethi. Ngaphandle kwesidingo senqubo yendabuko neyinkimbinkimbi yokuthuthukisa iwebhusayithi, amabhizinisi angasebenzisa iWebhu ukuze Izitolo Zokuphrinta ukuze ziqalise isitolo sabo. Lezi zitolo esezilungile ziza nazo zonke izici ezibalulekile zamabhizinisi… Funda kabanzi
Amathegi phrinta umkhakha, tech, izitayela
Ingabe udinga ukuba neziqu zasekolishi ukuze ube umklami?
Umthombo wesithombe: jobiano.com Ingabe udinga ukuba neziqu zasekolishi ukuze ube umklami? Abaklami bezithombe babamba indima enkulu kakhulu emhlabeni wedijithali ngoba badala izithombe ezibukwayo ezimangalisayo ezibonwa nsuku zonke, umzuzu nomzuzu, emhlabeni wonke. Laba bantu badala okokuzijabulisa, ukukhangisa, izindaba, nezici ngazo zonke izindlela, okuhlanganisa ukuphrinta kanye… Funda kabanzi
ikhasi1 ikhasi2 ... ikhasi36 Olandelayo →
Joyina Incwajana Yethu Yezeluleko Zokuklama & Izaphulelo eziyimfihlo!
Amakhadi Ebhizinisi Eliphepha Elimnyama + Ukugxiviza kwe-Foil
Amakhadi webhizinisi lombuthano
Amakhadi Ebhizinisi Likotini
Amakhadi we-Die Cut Business
Amakhadi webhizinisi ahlanganisiwe
Amakhadi Ebhizinisi Lobukhulu BaseYurophu
I-Hot Foil Amakhadi Ebhizinisi Agxivizwe
Amakhadi webhizinisi elihlanganisiwe
Amakhadi webhizinisi acwebezelayo
Amakhadi webhizinisi Mpunga
Amakhadi webhizinisi we-Horgraphic
Amakhadi Ebhizinisi Le-Black Layer Ephakathi
Amakhadi Amabhizinisi E-Letterpress
Amakhadi webhizinisi Linen
Amakhadi webhizinisi lama Magnetic
Amakhadi webhizinisi le-Matte
Amakhadi Ebhizinisi Elincane
Amakhadi webhizinisi lePearl
Isihleli Sekhadi Lebhizinisi Ngokwezifiso
I-Foil Ephakanyisiwe Emakhadini Ebhizinisi Athambile
Amakhadi Ebhizinisi Aphakanyisiwe E-Spot Gloss UV
Amakhadi webhizinisi weRose Gold Foil
Amakhadi webhizinisi we-Round Corner
Amakhadi webhizinisi likasilika
Spot Gloss UV Amakhadi Ebhizinisi
Amakhadi Ebhokisi Lezikhala
Amakhadi Ebhizinisi Ejwayelekile
Amakhadi Ebhizinisi leSoft-Suede
Amakhadi Ebhizinisi Engaxhunyiwe